World Bank to provide $350 million loans for NEP | Myanmar Business Today
HomeBusinessWorld Bank to provide $350 million loans for NEP
BusinessFeaturedIT & TelecomLocalMMBIZ News
The World Bank will providea$350 million credit to Myanmar from the International Development Association (IDA) to increase the output and efficiency of power generation and improve the resilience of Myanmar’s electricity system to climate change and disasters.
It also approved $110 million in additional financing for the Essential Health Services Access Project, implemented nationwide since 2015.
By using highly efficient technology, the project will help reduce greenhouse gas emissions per unit of electricity produced and investments in the power network will improve the system’s preparedness against climate change and disasters.
“Myanmar has the lowest electrification rate in South East Asia with only 50 percent of households connected to the public grid. This project will help close the power supply gap in an affordable and environmentally sustainable way, thereby removing one of the key constraints to achieving Myanmar’s goal of universal electricity access by 2030,” said Mariam Sherman, World Bank Country Director for Myanmar, Cambodia, and Lao PDR.
The interest rate for the thirty-year term loan with five years of the grace period is 1.15 percent along with 0.75 service fees.
The Government of Myanmar adopted the National Electrification Plan in 2014 to achieve universal access to sustainable electricity services by 2030, drawing on World Bank analytical support provided through the National Electrification Project (NEP). To date, the NEP has delivered electricity access to2million people and to schools, rural health clinics, and community centers by extending the public grid in over 5,000 rural villages and delivering Solar Home Systems and renewable energy mini-grids in 7,200 villages throughout the country.
ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို လုံလောက်စွာ ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ရန် လျှပ်စစ်ကဏ္ဍအတွက် ချေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၃၅၀ ချေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ထုတ်ပြန်ထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်မှု စက်စွမ်းရည် တိုးမြှင့်နိုင်ရန်၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစနစ်သည့် ရာသီဉတု ပြောင်းလဲမှုဒဏ်၊ သဘာ၀ဘေးအန္တရာယ်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိရန် အစရှိသည့် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်းအတွက် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ရန်ပုံငွေအသင်း (IDA) မှ ချေးငွေပေးရန် ကမ္ဘာ့ဘဏ် ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့က အတည်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ချေးငွေဖြင့် ၂၀၃၀ခုနှစ်တွင် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရေးကို အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်အတွက် ယခုကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ အတည်ပြုလိုက်သော အဆိုပါ ချေးငွေသည် ငါးနှစ်မှ ခုနှစ်နှစ်အတွင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ၂ဆတိုးမြင့် ထုတ်လုပ်မှုတွင် အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ချေးငွေဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အား တိုးမြှင့် ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်နှင့် ဓာတ်အား ပြတ်တောက်မှု နည်းစေရန် ရွာမဓာတ်အားပေးစက်ရုံကို အဓိက ထားအဆင့်မြှင့်တင်မည်ဖြစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့ အဆင့်မြှင့်တင်သည့်အတွက် တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်များအတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ပိုမိုထုတ်လုပ်ပေးနိုင်မည့်အပြင် ဒေသအသီးသီးမှ အိမ်ထောင်စုများမှာလည်း နိုင်ငံတော်ဓာတ်အားစနစ်နှင့် ချိတ်ဆက်ကာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ယခုထက် ပိုမို အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ချေးငွေ၏ အတိုးနှုန်းမှာ ၁.၁၅% ဖြစ်ပြီး ၀န်ဆောင်စရိတ်အနေဖြင့် ၀.၇၅% ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ ချေးငွေ ပြန်ဆပ်ကာလအနေဖြင့် ဆိုင်းငံ့ကာလ ၅နှစ်နှင့် ပြန်ဆပ်ကာ ၂၅နှစ် စုစုပေါင်း နှစ်၃၀ သက်တမ်းဖြစ်သည်။
လက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင်သည့် အိမ်ထောင်စု ၅၀%ကိုသာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်လျက်ရှိသည်။ အမျိုးသား လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရေး စီမံကိန်းအရာ ၂၀၂၁ခုနှစ်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံး၏ ၅၅%၊ ၂၀၂၆ခုနှစ်တွင် ၇၅% နှင့် ၂၀၃၀ခုနှစ်တွင် ၁၀၀% လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
Previous articleQR Code System for Interbank payment likely to launch this year
Next article“Lemon” or not, Trump is stuck with Phase 1 China trade deal